Wechidiki mamorekuru NAD +: yakakosha coenzyme muhutano hwevanhu-Shangke Chemical
Wechidiki Molecule NAD +: A Coenzyme Inotakura Basa Rinokosha Muhutano hwevanhu
Vakambonzwa nezvazvo Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) kana "Tsime Rouduku"? " Nehutano hwakanaka uye maekisesaizi, muviri wako unowanzogadzirirwa kuve nemetabolism yakaringana.
Nehurombo, nekurwara, zera uye / kana hupenyu husina hutano, muviri wako unotanga kuona kusakwana kwakasiyana siyana uko kunoona kushanda kwayo kuchiderera zvinoshamisa. Yakadzika nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) mazinga ari pakati peizvi kushomeka, ndipo ndipo panowanikwa NAD + inowedzera inouya inobatsira kuvhara mune kushomeka gap, kunyanya mukusimudzira hutano kukwegura maitiro.
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) inoreva coenzyme inosanganisira vaviri adenine uye nicotinamide. Chero sero mhenyu rine chemukati chemakemikari, iri rinobva kuNicotinamide Riboside. Iwo mazinga eNAD mumuviri wemunhu anokonzeresa huwandu hwake hwekukwegura.
Kune marudzi maviri eNAD, ayo ari, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) uye nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH). Iyo yekutanga ine mamwe ma elektroni, uye ndozvinoisa parutivi kune iwo ekupedzisira.
Chii chinonzi NAD +?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) ndeye pyridine nucleotide iripo uye yakakosha kwazvo musero rega rehupenyu. Iyi pyridine nucleotide inobatsira maitiro mazhinji ezvekuzvarwa maanoshanda se key cofactor pamwe ne substrate. Aya maitiro anosanganisira kugadzirwa kwesimba, hutano hwekugadzirisa kweDNA uye kugadzirisa, immunoregulation uye gene expression. Izvo zvinotsanangura iyo NAD + kukwegura chiratidzo kudzoreredza simba.
NAD + inoitawo basa rinokosha kune wechipiri mutumwa kusaina pamwe neye immunoregulatory mabasa.
Seyemukomana wechidiki. NAD + yakawonekwa sechinhu chakakosha pakuchembera. Zvidzidzo zvakasiyana siyana zvakatsigira chinzvimbo chekuti NAD + chikamu chemuviri wemunhu chine hukama chakanangana nehudiki hwemunhu. Akakwira maNAD + mazinga, mudiki masero emuviri, minwe uye muviri wese unooneka. Izvo zvinoumba hwaro hweNAD + kukwegura kudzoreredza mukurumbira.
Kune rimwe divi, kushomeka kweNAD + kunogona kukonzera kuneta uye hosha dzakasiyana siyana. Sezvo zvakadaro, akakwana maNAD + mazinga pasina mubvunzo akakosha kune hutano hwemunhu.
NAD + Inoshanda Sei?
Kana muviri wako ukatadza kuzadzisa nehutano hwakagwinya uye huwandu hwehomoni yekugadzira, inotanga kuratidza dzakasiyana siyana hutano hwakadai sekudzikiswa kwemaitiro, nyaya dzekurangarira uye kudzikira kwekufunga. Izvi zvinodaro nekuti inoshaya akakwana NAD + uye NADH mazinga ekutsigira akajairwa patsva uye basa remasero emuviri.
Kunyanya, iyo kiyi NAD + basa ndeyekutsigira mhinduro yemuviri yemuviri, nekugonesa kuendesa maelekitori kubva kune imwe molekyumu kuenda kune imwe, kuburikidza nechirongwa chinozivikanwa seye redox reaction. Kubudikidza neRoxox reaction, zvinovaka muviri zvinokwanisa kusunungura simba rakachengetwa musina kusimba kaviri oxygen oxygen.
Kazhinji, masero emuviri wako anoda simba kubva kweropa kuti riite simba kuti riite mabasa akasiyana siyana e metabolic. Kunyanya, iwo simba ravanoda rakachengetwa semafuta acids uye glucose. Nekudaro, iyo yekutanga basa reNAD ​​+ enzyme pano ndeyekufambisa kutakura kwemasimba emagetsi kubva paropa kuenda kumaseru akakodzera.
Kana iyo fatty acids uye glucose kuburitsa simba, iyo NAD + enzyme inofambisa iyo yekufambisa yesimba kune mitochondria yekuwedzera kushandurwa kuva cellular simba. Zvikasadaro, kana kuri kushomeka kweNAD +, kuiswa kwesimba muchitokisi kunokanganisika, uye izvi zvinokonzeresa kusagadzikana kwemitochondrial, iyo inomhanyisa maitiro ekukwegura.
Kune NADH yega yega, NAD + inokwanisa kuburitsa matatu maODP mamorekuru. Nekuda kwekushandiswa kwesimba kwemasero, iwe unowedzera kuve nesimba, zvese nepfungwa uye nemuviri, nekuti NAD + yakapa maitiro ako eukweguru ane hukama nekusimudzira kuburikidza ne oxidation.
Kunyanya, iyo huru NAD + basa inosanganisira activating ma enzymes anotarisira redox reaction mumuviri. Aya ma enzymes anozivikanwa pamwe chete seanowo oxidoreductases. Izvo zvinosanganisira Sirtuin enzymes (SIRT), poly-ADP-ribose polymerases uye cyclic ADP ribose hydrolase (CD38).
Uchitarisa pane Sirtuin activation, zvakakosha kuziva kuti chekutanga basa reasirini ma enzymes ndiko kudzima majini ayo anogonesa kukwegura. Mhando dzinosanganisira idzo dzinotora chikamu mune mafuta synthesis uye chengetedzo, kuzvimba uye kutungamira kweshuga yeropa. Kuti Sirtuin enzymes ikwanise kuita izvo, inoda maNAD + enzymes sezvo aya maNAD malekyumu anovabatsira kutanha vanobvisa mapoka eacetyl kubva kumapuroteni kuti agadziriswe.
Naizvozvo, kuwedzera kweNAD + mazinga anodudzira muhuwandu hwepamusoro hwevanoshandira Sirtuins. Izvi zvinoguma nekuwedzera mitochondrial kufema pamwe nekuwedzeredzwa kwe insulin kunzwa.
Mhedzisiro dzekugadziriswa kwemetabolism yakadaro inotungamira kudzoserwa kwemhedzisiro yekukwegura kwehuropi, nekuda kweiyo NAD + kuchembera simba rekudzoreredza. Zvakare, kuvandudzwa kwema insulin kunobatsira muviri wako kuchengetedza hutano hweeropa zvine hutano. Nekudaro, masero emuviri wako anoratidzika kunge madiki uye anozvibata nenzira yehudiki, achikupa kutaridzika sewechidiki zvekare.
Uyezve, NAD + yakawonekwa seyakakura iyo inonyanya kukonzera kusaina kusaina, iyo inoumba hwaro hwekutaura kwesero-kune-cell. Zvakare, inoshanda senge chisino neurotransmitter, ichiparura ruzivo kubva kumitsipa kuenda kune yakasviba mhasuru memuviri 'activor maseru.
Zvakanakira / Basa reNAD ​​+
Kune vazhinji NAD + zvinobatsira uye mabasa anosanganisira:
1.Protection kubva kune makore-ane hukama nemamiriro ezvinhu
Iyo NAD + anti kukwegura mabhenefiti iri pakati pezvikonzero zvikuru nei vanhu vane hutano-savvy vanoda kuona yavo NAD + nhanho ane hutano nguva dzese. Sezvo vanhu vachembera, kukuvara kwavo kweDNA kunowedzera, uye izvi zvinokonzera kudzikiswa kwemazinga eNAD +, SIRT1 chiitiko inoderera uye yakadzikira mitochondrial basa. Izvi zvinoitika nekuda kwe cellular oxidative kushushikana, iyo, mumutauro we layman, zvinoreva kuti ma antioxidants emuviri uye emahara radicals haisi kuyenderana.
Nekuda kweizvozvo, munhu akakwegura anonyanya kubatwa nehutano hwakasiyana-siyana senge atherosclerosis, chirwere chemoyo, arthritis, chirwere chemukati, chirwere cheshuga uye chirwere chehuropa.
Neraki, tsvakiridzo yakawanda yekutsvagisa inoratidza kuti NAD + inopa oxidative kusagadzikana kwekudzivirira kumasero emuviri. Naizvozvo, kutora NAD + zvekudya, zvekuwedzera kana kutora dzimwe nzira dzekuvandudza dzeNAD + kunogona kubatsira vanhu vakura, kunyanya avo vanopfuura makore makumi mashanu ekuzvarwa, kuchengetedza hutano hwakanaka kunyangwe kugara kwavo pasi kuchingowedzera.
Iyo yekuwedzera NAD + inovandudza mashandiro uye kutsigira kukura kwemitochondria. Inotora chikamu chakakosha pakuchengetedza yakakwana yeATP mazinga mumasero, izvo zvingadai zvisina kukanganisa kukanganisa kwekukwegura.
Sezvambotaurwa, NAD + inotsigira kugona kugadzirwa kwesimba remitumbondria yemuviri wako. Kana mitochondria yako painenge isina kuburitsa simba rakakwana, nhengo dzakakosha senge mwoyo, uropi, tsandanyama nemapapu hazvikwanisi kuita mushe uye zvinotungamira mukuneta uye nekudzikisira kukurudzira.
Ukuwo, kana muviri wako uine NAD + yakakwana nhanho, nhengo idzi dzinokwanisa kuita pamatanho ane hutano uye semhedzisiro, unonzwa uine simba, uchikurudzirwa, uine moyo uye uine pfungwa dzakajeka. Sero rega rega rinorarama rinoda coenzyme iyi sezvo inosimudzira kugadzirwa kweadenosine triphosphate.
Masero anoshandisa adenosine triphosphate kuburitsa simba iro nhengo dzako dzakasiyana dzaunoda kuita kwaunoda. Kana muviri wako wakawedzerwa simba, masero ako anokwanisa kurwisa manzwiro ekupera simba zvakanyanya.
3.Kuvandudzwa kwehuropi basa
Kuneta kunoderedza basa rako rekuziva. Inoita kuti unzwe sekunge pfungwa dzako dzakapusa kana makore. Nekudaro, isu tatoona kare kuti NAD + inopa kuzorodza mukuneta. Nekudaro, iyo coenzyme inowedzera basa rako rehuropi nekukonzeresa kugadzirwa kwakakwana kwesimba kwehuropi hwako maseru, zvichivagonesa kurwisa kupera simba. Nekuda kweizvozvo, pfungwa dzako dzinowedzera kusvinura uye nekupa simba zvakakwana kubata mabasa akasiyana siyana ayo anoda kuti iwe ufunge.
4.Improved cell kusagadzikana kuramba
Mune imwe ongororo yakanangwa nekumisa kukanganiswa kweNAD + pane cellular oxidative kusagadzikana, vatsvaguri vakaona kuti Kurapwa kweNAD + yakaita kuti mabhii masero awedzere kushushikana. Kune rimwe divi, masero asina kupihwa neNAD + akakundwa kune oxidative kushushikana. Naizvozvo, zvinoreva kuti coenzyme iyi inowedzera hupenyu hwemasero emuviri wako, ichibatsira muviri wako kurwisa zvisikwa zvakasiyana-siyana zvinokonzeresa chirwere zvakanyanya.
5.DNA inogadzirisa yehurefu hwehupenyu
Muhupenyu hwako hwezuva nezuva, iwe unoratidzwa kune zvakasiyana siyana uye mamiriro ezvinhu anogona kukuvadza iDNA yako. Yakakuvadzwa DNA inopfupisa nguva yako yepamoyo. Nekudaro, nekuwanikwa kwakakwana kweNAD + mumuviri wako, aya ma coenzymes anogadzirisa kugadziriswa kwekukanganisika kwekutakura nekutakura maelekitori kunzvimbo dzine DNA dzakakuvadzwa. Izvi zvinoenderana nezvidzidzo zvakawanda zvakauya nemhedziso yekuti kuzadzikiswa kweNAD + kunowedzera hupenyu hwechipfuyo kana munhu wenyama.
6.Better kurara uye kudya maitiro
Vatsvakurudzi vakasiyana siyana vakaona kuti NAD + ine pesvedzero inoshamisa pagotwe remunhu kurara pamwe neye nzara nzira. Iyo nguva yaunowanzo kurara kana kumuka uye kuyerera kwakawanda kwezuva rako rakafanira zvinoenderana nemweya wako rwiyo. Zvakare, kugadzirwa kwehomoni yenzara mumuviri wako kunokurudzirwa zvikuru neyakagadzirwa kemikari.
Kubatana kwakaringana pakati peesirtuins uye NAD + mhedzisiro mune inonzwisa tsitsi radhi uye kudya. Zvikasadaro, kuvhiringidzwa kweNAD + kana masiristini kunoguma usina hutano unotenderera wedenderedzwa, nokudaro zvisina kunaka kudya uye kurara peteni. Naizvozvo, NAD + inouya inobatsira pakurara une hutano uye tsika yekudya. Nezviri izvi muchiongorora, zvichave nyore kwauri kuti uwane uye uchengete huremu hune hutano.
Nekupa zvese zvakataurwa pamusoro pebasa zvinobatsira, hapana mubvunzo kuti NAD + inoita basa rakakosha mukubatsira vanhu kurarama hupenyu hune hutano kunyangwe pazera rechikuru.
Iko Kushandiswa / Mashandisiro eNAD +
1.Iwakasimudzira kudzidza uye ndangariro kugona
Vanhu vazhinji vanoziva kuti kemikari iyi inopa zvakasikwa
kudzoreredza pamwe nekuvandudza kwenzira dzeNeural muuropi.
Kunze kwezvo, iyo inobvisa kupera kwepfungwa uye kwakawanda, nekudaro ichivandudza kujekesa kwepfungwa.
Nekuda kweizvozvo, munhu anokwanisa kudzidza uye kuyeuka zvakanyanya zvinobudirira.
2.Thicker zvipikiri uye bvudzi
Misumari nebvudzi zvinowanzoonekwa kutsanangura runako rwemunhu, kunyanya vakadzi. Nekuda kwekugona kwayo kusimudzira kugadziriswa kweDNA yakakuvadzwa, NAD + yakakosha kuti zvipikiri zvakakura uye nevhudzi. Saka nekudaro, ndeye-yakatsvaga-yemhando-yemakemikari yakakomberedza vanhu vane hanya nezvevhudzi ravo rakatetepa uye / kana zvipikiri.
3.Better ganda hutano
Kuchembera zera pakati pevanhu kunouya nekukanganisika kweganda sekuita makomkete, mitsara yakanaka uye kusarudzika kusaenzana. Nekudaro, avo vanoda kuzvidza ivo kuchembera zviratidzo vanotora NAD + zvinowedzera, izvo zvinoshanda mushe pachinangwa. The NAD + anti kukwegura kubatsirwa kwakakurumbira.
4.Muscle basa kugadzirisa
Sezvo vanhu vanokwegura, ivo vanopfupika uye vasina simba nekuda kwekusagadzikana kwemhasuru kunouya nechembere. Nekudaro, avo vakawana iyo yekudzivirira-kukwegura simba reNAD ​​+ kuregedzera pairi kuvandudza mashandiro emisipha yavo.
5.Kugadzirisa kwezvirwere zvinoenderana nezera
Uyezve, vanhu vane hushoma huwandu hweNAD + mumiviri yavo nekuda kwekukwegura vanotsvaga ekunze masosi ekunze emakemikari akaumbwa kuti vakwanise kusasimba. Kuwedzerwa kupihwa kweiyo enzyme kunoita kuti miviri yavo ikurire kurwisa kwakasimba kuzvirwere zvakasiyana siyana zvine hukweguru.
Kunyangwe iyo NAD + iri nzvimbo yakasikwa, inofanira kutorwa zvine mwero. Maererano neFood and Drug Administration agency (FDA), yakachengeteka NAD + dosage inowanikwa magiramu maviri pazuva. Iyo yakakurudzirwa nguva yekurapa ndeye mazuva manomwe kusvika gumi nematanhatu, zvichienderana nenhoroondo yekurapa yemushandisi.
Mhedzisiro yekudonha kweNAD + Level
Icho chakakosha kune wese munhu kuti ave nechokwadi chekuti vane yakakwana NAD + nhanho. Kuwedzera
NAD + mazinga anodikanwa kune vanhu vari kusangana neNAD + kushomeka. Izvi zvinodaro nekuti kushomeka kweNAD + kune yakawanda isingafadzi mhedzisiro inosanganisira:
1. Kukwegura zviratidzo
Mune mudiki, iyo NAD + uye NADH zviri muhuwandu hwakanyanya zvichienzaniswa nemazinga anowanikwa muvanhu vakura. Iyo yekudzikisa NAD + mazinga nezera inotungamira kune yakaderedzwa SIRT1 chiitiko, nekudaro kukurumidza kuitika kwechiratidzo chekukwegura. Mumamiriro akadaro, iyo nzira inonyanya kushanda yekudzosera kana kudzivirira izvo zviratidzo ndeyekuwedzera iyo NAD + mumuviri. Ne coenzyme inowedzera inokonzeresa chiitiko cheSIRT1 zvakanyanya, nekudaro iyo yekudzoserwa kwemuviri kutarisa uye kunzwa.
Hypoxia mamiriro ezvinhu anozivikanwa neakaderera okisijeni kuwanikwa mumuviri wemunhu. Mamiriro acho anotungamira kuwedzera NADH uye yakaderera NAD + uye inoonekwa nezviratidzo zvakadai seganda discoloration, kuvhiringidzika, kuderera kwemoyo, kutadza kufema, kutsvaira uye kusimba kukosora.
Vanhu vari kutambudzika ne hypoxia vanogona kuwana zororo kubva kune zviratidzo nekuwedzera yavo NAD + nhanho. Avo vari pangozi yakakura yemamiriro ezvinhu vanogona zvakare kuderedza kushungurudzika kwavo nekusimudzira yavo NAD + mazinga zvakare.
3. Kupiswa kwezuva uye kukuvara kweganda
Kutya kupisa kwezuva kana kukuvara kweganda nekuda kwekubuda kwezuva? NAD + uye NADH ndakakufukidza. Izvi zviviri zvinopa kudzivirirwa kweganda rako kubva kuzuva pamwe nekenza yeganda nekumedza UVB neUVA masekisheni, zvichiteerana.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinzwa kuneta kusinganzwisisike uye hushoma hwekushaya simba kwemuviri, iwe unogona kunge uine yakaderera NAD + mazinga, nokudaro akaderedzwa SIRT1 basa. Mune zviitiko zvakadaro, NADH kana NAD + kuwedzeredza kunogona kudzoreredza zviratidzo zvekurapa kuburikidza nekuwedzera basa rekuita kwemochondria.
Kuburikidza nekumisikidzwa kweSirtuins, NAD + inovandudza basa reiyo metabolism-inokurudzira genes zvisingaite. Sezvo, vanhu vane uremu hwekutarisako nyaya nekuda kwehurombo metabolism vanogona kuwana yavo yavanoda huwandu huwandu kuburikidza neNAD +. Izvi zvinogona zvakare kuve mhinduro inoshanda kwauri kana iwe uchitya kuwana husina hutano uremu kana yakakwira LDL cholesterol semugariro we metabolism-kukanganisa mamiriro.
6. Zvirwere zvemoyo
NAD + basa mumuviri rinoshandura iyo mitochondria chiitiko, izvo zvakakosha pakuita kwakakodzera kwemoyo. Iko kushomeka kwemakemikari komichi kunogona kukurumidzisa kukundikana kwemoyo, chimwe chinhu icho hapana munhu angazoda kusangana nacho. Nekudaro, kana iwe uine akadzika Nikotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) mazinga, pamwe semugumisiro we ischemia-reperfusion kukuvara kana chero chimwe chirwere chemoyo, iwe unonzwa zviri nani uye moyo wako wehutano uchavandudza pakukwidza kuwanikwa kwe coenzyme mumuviri wako.
Kutambura kubva kune multiple sclerosis? Kana hongu, saka iwe unofanirwa kufunga nezvekupomba mune izvo zvakanaka zveNAD + poda kuburikidza NAD + inowedzera kudya kwechiratidzo chechiratidzo zororo.
Multiple Sclerosis inoratidzirwa neiyo yakaderera NAD + chikamu chemuviri wemuviri immune system painosangana nekusakwana kweimwecheteyo. NAD + kuwedzeredza kuchaderedza kushomeka kwemakemikari kemukati mutsinga, nekuvandudza yako zviratidzo zveMS.
8. Hutano hwepfungwa pamwe nemamiriro ezvinhu ehemoodegenerative
Kana iwe ukaona hutano hwepfungwa kana mamiriro emagetsi echirwere chechirwere cheAlzheimer's, chirwere cheParkinson kana sitiroko, ipapo NAD + yekuwedzeredza inouya inobatsira mukudzorerwa kwehutano hwako. Izvi zvinodaro nekuti mamiriro aya anokonzeresa Kushomeka kweNAD +, ichitungamira kudzikiswa kwehuropi hwako simba uye dopamine. Sezvo simba rehuropi uye dopamine zviri zvakakosha zvezvikamu zvako zvepfungwa uye zvemasisitimu, zviratidzo zvako zvingave zvakakurisa kana ukasawana nzira yekuwedzera yako NAD + mazinga.
Sei Kuwedzera NAD + Levels Nomuzvarirwo?
1. Kuita kurovedza muviri
Sezvo iwe paunenge uchikura, kurovedza muviri kwakakosha kune hutano hwako. Nekugara uchirovedza muviri, kugona muviri wako kubereka NAD + inopiwa inowedzera. Unoda simba kuti uite kurovedza muviri. Naizvozvo, paunonyanya kurovedza muviri, ndipo panowedzera muviri wako simba nekukurudzira kugadzirwa kwemitochondria. Nekuda kweizvozvo, yako NAD + chikamu chinowedzera nechisikigo.
2. Kugara uchitsanya
Kunyangwe kutsanya kuchinyanya kuitwa senzira yekuzvipira kwechitendero, iyo zvakare ine hutano hwakasiyana hwekupa, kusanganisira kuwedzera NAD + mazinga uye SIRT1 activation.
3.Avovo yakanyanya kuwanda kwezuva kuratidzwa
Radiation ye Ultraviolet kubva kuzuva inosimudzira kukwegura kweganda rako. Zvakatoipisisa, kuratidza zvakanyanya kuwanda kwezuva kunokuvadza zvitoro zvinobatsira pakugadziriswa kwemasero eganda rakakuvara. Izvi zvinotungamira kuderera kweNAD + nhanho. Nekudaro, kudzivirira izvi kubva kuitika uye kubatsira muviri wako pakuchengetedza hutano hweNAD + nhanho nekudzivirira kuratidzwa kwakawanda nemwenje yezuva chero iwe paunenge uchikwanisa. Zv zvakare, zvidzivirire pachako kubva mukukuvara kwezuva nekufukidza ganda rako neyakajeka sunscreen paunenge uchienda kunze zuva rakacheka nyika.
4. Kutora NAD + yekuwedzera
Kunyangwe uine hutano-hwekudya zvekudya zvinovaka muviri musana weiyo yakakwana yeNAD + kuwanikwa mumiviri yedu, dzimwe nguva chimwe chinhu chinofanira kuitwa. Kunyanya, vanhu vane makore makumi mashanu ekuzvarwa vanoda mari yakawanda yeNAD + pane izvo zvingajairwe nevekudya zvine mwero. Muchiitiko ichi, NAD-infused supplements inouya inobatsira. Aya ma supplements anouya nenzira yemakapu uye ari nyore kuwana. Vane Vitamin B50 (nicotinamide riboside) inozochinjwa kuti ive NAD + mumuviri.
5. Kurara zvakakwana
Kurara zvakakwana zuva rega rega ndeimwe nzira yechisikigo yekuwedzera mazinga eanti-kukaka kemikari kemukati. Zororo rakanaka rekurara rinosimudzira kugadzirwa kweinjini dzesimba mumuviri wako.
6.Kutora chikafu cheNAD +
Vatsvaguri vakaona kuti, nicotinamide riboside, fomu yevhitamini B3, inoshanduka kuita NAD + mumuviri. Iwo ma coenzymes, sekufanana neakagadzirwa-NAD-anogadzirwa nemuviri, anozoshandiswa mune akasiyana metabolic process anoguma nekudzora kana kudzoreredza maitiro ekukwegura mumuviri wemunhu. Saka nekudaro, chikafu chine vhitamini iyi (chikafu cheNAD +) chinogona kupa hukuru hweNAD + kuwedzera.
Zvikafu zvine nicotinamide riboside, uye zvaunogona kutarisira kuti uvandudze yako NAD + nhanho zvakasikwa inosanganisira:
Mukaka wemukaka: Tsvagiridzo inoratidza kuti litita imwe neimwe yemukaka wemombe ine 9 μmol yeNAD +.
Hove: mamwe ehove mhando senge tuna uye salmon akapfuma muNAD +. Izvo zveNAD + zvirimo mukapu imwe ye tuna zvakangoita 20.5mg uye 10.1mg yesalmon.
Iyo Crimini howa: Kana iwe ukatora mukombe une imwe yeKrimini Mushroom, iwe uchave wakapa muviri wako ne3.3mg yeNAD +.
Nyama yehuku: inga mudyiwa, yakagochwa kana yakagochwa, imwe kapu yenyama yehuku inokupa 9.1mg yeNAD +.
Chingwa chine Mbiriso: Mbiriso isiti yakapfuma yeNAD + kubva pakuenzaniswa nemukaka wemukaka. Naizvozvo, mbiriso chikafu senge makeke nechingwa zvinogona kubatsira mukuzadzikazve kweNAD + nhanho mumuviri wako. Kunyangwe doro zvakare rinogona kushanda seyakabva coenzyme, inofanira kutorwa zvine mwero.
Green veggies: Mimwe miriwo yakasvibira iri zvakare Zvikafu zveNAD + , kunyanya peas uye asparagus, vakapfuma mune yechidiki-inokurudzira chemakemikari yakagadzirirwa NAD +. Kapu yemapisi irimo, 3.2mg yeNAD + nepo kapu yemaparagus ine 2mg yecomputer.
Kugamuchira ketogenic kudya: Kuve mune zvekudya zve keto zvinoreva kuti unozvidzikisira kuzvikafu zvine mafuta asi zvakadzika-carb. Paunotora ichi chikafu, muviri wako unopinda mune inozivikanwa ketosis umo unoshandisa mafuta kwete glucose yesimba. Izvi zvinoita kuti NAD + kune NADH chiyero chiwedzere.
Zvimwe Zvinhu Zvinodzora NAD +
Nzvimbo dzakaderera NAD + dzinogona kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana kusanganisira:
1. Kuzvimba kusingaperi
Kurwara kusingaperi kunobata NAMPT enzyme uye majini anotarisira circadian rwiyo. Nekuda kweizvozvo, iyo NAD + mazinga anodonha.
2. Circadian rumbo rwekuvhiringidzika
The ZWL + kugadzirwa inoda NAMPT enzayemu, kunyanya yokupedzisira danho kwacho. Zvisinei, kana munhu Ritmos mutinhimira iri kwakakanganiswa, kwemajini basa kweShanduro enzayemu vari muchiuto uye somugumisiro, kugadzirwa kwezvinhu ZWL + mumuviri kunoderedza.
3. High chitsama ropa shuga uye jekiseni kwevari
Kana siyana ropa shuga uye jekiseni pamusoro awedzere zvakanyanya, kuti NADH / ZWL + reshiyo inowedzerawo. Izvi zvinoreva kuti huwandu NADH ndiyo nzira zvikuru yepamusoro sezvo zvichienzaniswa padanho ZWL +.
4. Doro rinoshatiswa
Yakawanda tsvakurudzo inoratidza kuti panyaya iyi kushushikana semhedzisiro ye Chisingaperi doro zvinokonzera anenge 20% zvinoderedza ZWL + nhanho. Izvi imhaka yokuti doro kunokonzera Inopera kukuvara oxidative iyo kuzvirega zvichikanganisa kweShanduro coenzyme.
5. DNA dhemeji
Kana DNA iri massively wakaremara, zvakawanda PARP mamorekuru zvinoda kuti
kugadzira uye adzorere functionality ari hunenge DNA. Sezvo mamorekuru
dzinofambiswa ne ZWL + Naizvozvo zvinoreva kuti yokupindira avo dzikawanda aigona
ona kushayikwa makemikari mukomboni mumuviri wemunhu.
6. Low sirtuin basa
Tichifunga kuti sirtuin anoita Ritmos mutinhimira, akaderedza sirtuin yomuropa naizvozvo aigona kutyora zviri Ritmos masaisai uye. Somugumisiro, ZWL + chechetere kunoderedza.
Pane Side Migumisiro About ZWL +?
Kazhinji, ZWL + supplementation zirokwazvo ngozi. zvidzidzo Human kuitwa kumisa kuchengeteka pamwero kuwedzera coenzyme mumuviri zvinoratidza kuti zuva 1,000mg kusvika 2,000 MG ZWL + chipimo chemushonga zuva nezuva vasina migumisiro inokuvadza vanhu.
Zvisinei, pane Kashoma apo nyoro nemishonga kunge vakaudza kuitika nokuda yaunodya ZWL +. Migumisiro izvi zvinosanganisira kuda kurutsa, fufune, nomusoro, akanyanyisa kuneta (kuneta) uyewo manyoka
More Information pamusoro ZWL +
The ZWL + upfu, iyo inoshandiswa kuita ZWL + zvokuwedzera, muchena, hygroscopic uye zvikuru mvura-soluble. Makemikari yokuita ZWL + upfu is C21H27N7O14P2.
Kana uri vaipupurirwa mugadziri uye vanofarira upfu ZWL + nokuti ZWL + chinamatidzwa pakugadzira, Nechokwadi kuti wawana kubvira anonyatsozivikanwa rinoremekedzwa kudzivisa achitenga yokunyepera. Unofanira kuziva kuti uri kubata yaunovimba mutengesi kana kutenga ZWL + chinamatidzwa. Note kuti unogona kugadzira nyore ZWL + upfu kana ZWL zvokuwedzera + paIndaneti.
ZWL + coenzyme ndiko morekuru kuti inoita basa rinokosha mune utano hwevanhu. ZWL + makomborero, izvo zvinosanganisira nani chepfungwa, kushushikana kurwisa DNA kugadzira, kupfuura vashoma nemishonga kuti chokuita supplementation yacho coenzyme. Kunze, ZWL + dzinorwisana kukwegura kubatsira chinhu kuti vanoda kuzvidza kukwegura zviratidzo anofanira kukurukura kuburikidza supplementation ZWL +. Zvisinei, zvakakosha kuti vave nechokwadi kuti wawana wako Nicotinamide Adenine Dinucleotide / ZWL + upfu kana ZWL + chinamatidzwa rongedza kubva kwakavimbika.
Anderson RM, Bitterman KJ, Wood JG, et unto. Zvitinakire yenyukireya ZWL + salvage gwara sokunonoka vakwegura pasina rinochinja rakadzikama-mamiriro ZWL + nhanho. J Biol Chem. 2002 May 24; 277 (21): 18881-90.
Gomes AP, Price NL, Ling AJ, et unto. Kuderera ZWL (+) induces munhu pseudohypoxic mamiriro kukanganisa kukurukurirana yenyukireya-mitochondrial panguva kuchembera. 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI, Guarente L. ZWL uye sirtuins vari kuchembera nokurwara. Trends Cell Biol.2014 Aug;24(8):464-71.
Price NL, Gomes AP, Ling AJ, et unto. SIRT1 inodiwa AMPK activation uye kunobatsira nemigumisiro resveratrol pamusoro mitochondrial ushande. Cell Metab. 2012 May 2; 15 (5): 675-90.
Satoh MS, Poirier GG, Lindahl T. ZWL (+) - zvaanoda yokugadzirisa tagovera DNA evanhu muchitokisi atakatora. J Biol Chem. 1993 Mar 15; 268 (8): 5480-7.
Sauve AA. ZWL + uye vhitamini B3: kubva muviri kuti kurapa. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):883-93.
1.What ari ZWL +?
2.How Ane ZWL Work +?
3.The Benefits / Rinoshanda pamusoro ZWL +
4.The Application / raishandiswawo ZWL +
5.NAD + chipimo chemushonga
6.The Migumisiro Falling Levels ZWL +
7.How To Wedzerai ZWL Levels + Sezvingatarisirwa?
8.Some Zvinhu kuti Decrease ZWL +
9.Is Pane Side Migumisiro About ZWL +?
10.More Information pamusoro ZWL +